Waliinga'iinsa daandii, hojmanee Afrikaa isa biroo
Ardiin Afrikaa guddina gama hundaatiin kan biyyoota Awurooppaafi Esshiyaa waliin yemmuu wal bira qabamee ilaallamu boodatti hafaadha. Ummanni ardichaa hedduun haala jiruufi jireenya boodatti hafaa keessa kan jiran yoo ta'u, sochii yeroo ammaa taasifamaa jiruun garuu ardii dukkanooftuun kun gara ardii abdii qabduutti tarkaanfachaa jirti.
Walqunnamtii ummattoota ardichaa cimsuuf babal'inni daandii lafarraa iddoo olaanaa qabata. Ajandaa bara 2063 galmaan ga'uudhaaf nageenya daandiiwwan ardichaa mirkaneessuufi sochii daandiidhaan ardicha walqunnamsiisuuf eegalame cimee itti fufuu qaba.
Bara 2063tti ardii Afrikaa daandii lafarraatiin walqunnamsiisuudhaaf kan karoorfame yemmuu ta'u, kanaanis ummata ardichaa gama hawaas diinagdeetiin walittihidhuuf karoorfamee hojjatamaa jira.
Yaa'ii Waldaa Suphaa Daandii Afrikaa haala daandiiwwan ardichaa itti fooyyeessuun danda'amurratti xiyyeeffatu dhiheenya kana Finfinnetti adeemsifameerratti babal'inni daandii ardichaa laafaa ta'uudha kan himame.
Pirezdaantiin waldichaa Obbo Rashiid Muhaammed akka jedhanitti, babal'inni daandiiwwan Afrikaa guddina waliigala ardichaatiif ga'ee olaanaa waan qabuuf ijaarsaafi suphaa daandiiwwaniitiif xiyyeeffannoo olaanaan kennamuufii qaba. Hanqinni daandiifi kanneen jiranis sirnaan suphamuu dhabuuurraa kan ka'e qonnaan bulaan ardichaa hedduun midhaan omishate yeroodhaan gara gabaatti geessuu dhabuudhaan kisaaraaf saaxilamaa kan jiru ta'uu ibsu.
Qonnaan bulaafi horsiisee bulaan ardichaa daandii omishaafi beeylada isaa gara gabaatti ittiin geeffatu dhabuun immoo isaan qofaaf osoo hin taane guddina biyya tokkoo irrattis dhiibbaan dhiibbaa olaanaa qabaata. Bakka daandiin mijataafi iddoo hundatti argamu hin jirretti hiyyummaa keessaa bahuun abjuu ta'uusaafi kanaafis dhimmi ijaarsaafi babal'ina daandii akkasumas suphaa Afrikaa ajandaa duraa ta'uu akka qabu himu.
Ministirri Geejjibaa Itoophiyaa Obbo Ahmad Shidee gama isaaniitiin akka jedhanitti, daandiin karoora biyyi tokka baafatte galmaan ga'uu keessatti gahee olaanaa qabaata. Kanaafuu Afrikaan daandii nageenyisaa mirkanaa'e diriirsuufi daandiiwwan dura turaniif immoo eeggumsi cimaan akka taasifamuuf hojjachuu akka qabdu dubbatu.
Akka ibsa ministirichaatti; walqunnamtiin salphaafi mijataa ta'e gama hawaasummaafi diinagdeetiin biyyoota ardichaa gidduu jiru akka cimuuf ijaarsi daandiifi suphaan yeroo yeroon taasifamuufi qaba. Kunis balaa konkolaataa hir'isuu keessatti ga'ee olaanaa akka qabu dubbatu.
Guddina Itoophiyaa keessatti galmaa'aa jiruufis shoorri dameen geejjibaa olaanaa waan ta'eef cimee kan itti fufu ta'a. Itoophiyaan daandii biyyoota akka; Keeniyaa, Sudaan, Suudaan Kibbaa, Jibuutiifi Somaaliyaa waliin walqunnamsiisu kan qabdu yemmuu ta'u, sochii biyyoota gaanfa Afrikaafi Baha Afrikaa daandiidhaan walitti hidhuuf taasifamuufis giddugala taatee kan tajaajiltu ta'uu eeru.
Walumaagalatti, yaa'iin waldichaa kan baranaa dabalatee yeroo 2ffaaf Itoophiyatti kan qophaa'e yoo ta'u, sochii biyyattiin babal'ina daandii irratti taasisaa jirtu biyyoota ardichaa biroodhaaf fakkeenya gaarii ta'a.
Torban kana/This_Week 11232
Guyyaa mara/All_Days 1820652